Waxay U Baahan Yihiin Si Ay U Garaacan Man Utd & Shirka Jaraa’id Ee Klopp Ka Hor Ciyaarta Berri %
Jurgen Klopp, tababaraha kooxda kubada cagta Liverpool, oo wariyaasha la hadlay ka hor ciyaarta ay la balansan yihiin Manchester United, kaasoo ka tirsan Premier League, ayaa qiray in kulankaan uu yahay mid aad u weyn.
Kulanka ay wada dheeli doonan labadaan naadi maalinta Berri ah, kaasoo ka dhici doona garoonka Anfield, kaasoo ay leedahay Reds, ayaa natiijada kasoo baxda waxaad kala socon doontaa Shabakada Laacib.so.
Klopp, ayaa wuxuu cod dheer ku sheegay in kulankaan ay ubaahan yihiin inay soo bandhigaan muuqaal ciyaareedkooda ugu fiican, islamarkaana ay diirada saaranaa inay dhowr jiho ay ka weeraraan daafacyada United.
“Waa kulanka ugu weyn, kaasoo aan qiyaasi karo,” ayuu hadalkiisa ku bilaabay Klopp, isagoo fadhiya shirka Jaraa’id ee ciyaartaan ka hor.
“Dhab ahaantii waxaan dooneynaa inaan horey usocono, waxaan ubaahan nahay Boqolkiiba boqol, si aan wax xun halkaan uga helno.
“Inagoo waqti wanaagsan ku jirno ayaan dheeleyna ciyaartaan, laakiin waxaa muhiim ah inaan helno tayadeena ugu fiican.
“Hadii aan guuleysano, waxaan heleynaa hal dhibcood iyo wax ka badan, laakiin ma ahan mid aan haysanayno inta ka dhiman xili ciyaareedkan.
“Waxa kaliya ee aan si wanaagsan u saameyn karno ayaa ah inaan badino kulanka soo socda, waana United. Uma baahni inaan ka hadlayno miiska,” ayuu raaciyay.
Klopp oo si gaadmo ah loo weydiiyay, hadii uu qaab daafaceed dheeli doono ayaa wuxuu yiri: “Wax dhibaato ah kuma qabno inaan is-dafacno.
“Dadku waxay dhahaan waxaan ciyaareynaa qaab gaar ah, waxay cayaaraan qaab gaar ah, laakiin waa in lagu guuleysto, waxaana jira siyaabo kala duwan oo lagu guuleysan karo.
“Waa inaan difaacnaa dhamaanteena, lakiin ma ahan dagaal labo falsafad ah, waa kulan u dhaxeeya labo koox oo fiican, marka aan difaacano, waxaan doonayaa in dhamaan ciyaartoydeena ay difaacaan,” ayuu hadalkiisa kusoo xiray.
Man United vs LiverpoolOld TraffordPremier League